XOG: Wejiyaal cusub oo ka soo dhex muuqanaya Xukuumadda cusub & Odawaa oo.. | Somalia News
XOG: Wejiyaal cusub oo ka soo dhex muuqanaya Xukuumadda cusub & Odawaa oo..
Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa kulan gaar ah ugu tegay Ra’iisal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo sugaya helista kalsoonida Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka oo ku koobnaa Salaan iyo Hambalyo ku aadan Ra’iisal wasaaraha magacaaban, sida uu Odawaa bartiisa Facebooka ku sheegay ayaa hadana ka marneyn iney isla meel dhigeen Xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Xildhibaan Odawaa ayaa Ra’iisal wasaaraha cusub u rajeeyay inuu ku guuleysto xilkiisa.
“Waxaan caawa salaan ugu tagay Raiisul-Wasaaraha magacaaban mudane Mohammed Hussein Roble,Waaanna u rajeeyay inuu xilkiisa ku guulaysto,” ayuu yiri Xildhibaan Odawaa.
Warar hoose oo aan heleyno inkastoo dhab ahaanshahooda la hubin ayaa sheegaya in Wasiirka hore ee arrimaha gudaha Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa suurta gal ay tahay inuu ka soo muuqdo Xukuumadda cusub ee la soo dhisayo.
Xildhibaan iyo Siyaasiyiin badan ayaa isku dhaaf dhaafaya guriga uu degan yahay Ra’iisal wasaaraha cusub, kuwaas oo qaarkood ujeedka ay leeyihiin ay tahay iney raajiciyaan xil ay ka helaan Ra’iisal wasaaraha magacaaban.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dalbaday Ra’iisal wasaaraha cusub inuu si deg deg ah u soo dhiso xukuumad cusub mar haddii uu codka kalsoonida uu ka helo Xildhibaanada Golaha Shacabka.
The post XOG: Wejiyaal cusub oo ka soo dhex muuqanaya Xukuumadda cusub & Odawaa oo.. appeared first on Somali News Leader.
Previous articleSomalia claims army gains the upper hand in war on Al-Shabaab – Garowe Online
Next articleMaamulka madaxweyne Trump oo cunaqabateyn hor-leh kusoo rogay Iran iyo madaxweynaha Venezuela
Wasiirka Ganacsiga oo ka qeyb-galay Bandhiga cunnooyinka caalamiga ah oo lagu qabtay Turkiga+Sawirro
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xildhibbaan Khaliif Cabdi Cumar, ayaa magaalada Istaanbuul ee Turkiga kaga qeyb-galay bandhigga cunnooyinka caalamiga ah oo la qabtay markii saddexaad sidoo kale na ay ka soo qeyb-galeen in ka badan 20 wadan. Ganacsatada Soomaaliyeed oo garab ka helaaya wasaaradda ganacsiga iyo Warshadaha xukumadda federaalka Soomaaliya iyo hay’adda USAID gaar ahaan mashruuca GEEL, ayaa halkaas ku soo bandhigay cunooyin kala duwan oo ay ku jireen midhaha, sisinta iyo kaluunka kuwaasi oo ganacsatada iyo maal-gashadeyaasha caalamiga ahi ba ay aad u xiiseynaayeen. Wasiir Khaliif oo booqday goobta loo asteeyey in lagu soo bandhigo wax-soo-saarka Soomaaliya, ayaa ganacsatada uga ku boggaadiyey dedaalka ay sameeyeen, waxaana uu xusay inay ka dawlad ahaan ka go’an tahay siddii suuqyo caalami ah looggu heli lahaa wax-soo-saarka wadanka isaga oo sidoo kale na u mahad-celiyey mas’uuliyiinta mashruuca GEEL oo iyagu na mar walba taageero la garab taagan ganacsatada Soomaaliyeed. Bandhig Ganacsiyeedkan, ayaa kor-u-qaadaya siddii Soomaaliya ay suuqyo cusub ugu heli lahayd wax-soo-saarkeeda sidoo kale na ay maal-gasheyaal caalami ah ugu soo jiidi lahayd wadanka.
(Yurub) 26 Nof 2020. Macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa aaminsan in Reds ay u qalantay in laga adkaado kulankii xalay ee Champions League. Kooxda kubadda cagta Atalanta oo marti ku aheyd garoonka Anfield ayaa ku soo adkaatay 0-2, waxaana goolasha u dhaliyay xiddigaheeda Josip Ilicic iyo Robin Gosens, xilli ay ciyaartaan qeyb ka ahayd kulamada Afaraad wareega group-yada ee tartanka Champions League. Tababare Jürgen Klopp ayaa kaddib ciyaarta u sheegay warbaahinta: “Ma aheyn ciyaar u wanaagsan labada kooxood, labada kooxood ma aysan abuurin fursado badan.” “Waa guuldarro aan u qalanay oo aheyd ciyaar adag, garsooruhu ma uusan yeerinin firimbiga wax badan, taasina waxay xaalada ku adkeysay labada dhinac, wuxuu ahaa iska horimaad aad iyo aad u xoogan waxaadna u baahan tahay xoogaa nasiino ah.” “Marka qeybtii hore ay dhamaatay, sida caadiga ah waa xasilloon tahay, laakiin ciyaartoy qaarkood oo aan dheelin in muddo ah, way ku adkaatay iyaga, ma aanan helin waddo loo maro ciyaarta.” ”Way fududahay in laga hadlo kulan fiican. Waxaan haysanay daqiiqado laakiin maanaan helin fursado dhab ah, tani waxay ku dhici kartaa kooxaha kale.” Gool FM.